Indlela yokulungisa ingane endala ekuzalweni kwengane encane?
Ukuzalwa komfowenu omncane noma udadewethu kuhlale kungcindezelekile okwamanje kumntwana osekhulile manje. Ngakho-ke, abazali abaningi banesithakazelo sokulungisa ingane ekhulile ekuzalweni kwengane encane. Abazali bayakwazi ukusiza abantu ababili bomdabu ukwamukela nokuthandana!
C ukuzalwa komntwana wesibili, izibulo ekugcineni futhi kushintshana ngokungaguquki indima yomuntu oyedwa kumsebenzi womdala. Eminyakeni emingaki ayengenaye umntwana omdala, kuzothatha isikhathi sokuba afunde ukuphila ngemithetho emisha. Futhi okubaluleke kakhulu - ukukholelwa ukuthi ngokufika komunye umntwana, uthando lwabazali aluhlukanisi kabili, kodwa luvame kuphela.
Abazali kwakudingeka banqobe ekwenzeni izinkinga eziningi ezabonakala zingenakulinganiswa nokufika kwamazibulo. Ngaphandle kwemisebenzi eseyaziwa kakade kumama omncane nabazali, ngalesi sikhathi enye iyongezwa: ukudala indawo yokuthembela nenduduzo phakathi komdala nomncane kunazo zonke. Izazi zengqondo zeluleka ukuba zitshele ingane mayelana nokuvuselelwa komndeni ngokuzayo ngangokunokwenzeka. Akudingekile ukungena emidwebo ongadingekile womzimba, kepha inganekwane nge-stork ayifaneleki ngisho nangemivuthu eminyaka eyodwa ubudala. Tshela iqiniso - ngendlela efinyeleleka kwengane, ukumlungiselela ukuzalwa komncane kusengaphambili.
Ngisho noma abazali benquma ngesizathu esithile sokugcina isikhathi sokukhulelwa isikhathi, umntwana uzozizwa enokuthi kukhona okubalulekile okwenzeka emndenini. Ukungaqondi ukuthi yini engalungile, i-crumb ingabhekana nokukhathazeka, ukungezwani. Okokugcina, angase azizwe engakufanelekeli ukuba abazali bakhe bathemba. Ngakho-ke, kungcono ukutshela umntwana ukuthi umama esiswini unomfowethu omncane noma udadewabo omncane. Chaza ukuthi manje kuncane kakhulu - ayikho enye ubhontshisi. Kodwa usuku ngalunye lukhula, futhi "indlu" yayo iba sikhulu. Uma ungazi ukuthi ungaqala kuphi, bheka ulwazi kuma-encyclopedias for the education of the child.
- Thumela kokuhle! Umntwana omdala unomhawu kakhulu kubazali kumncane kunabo bonke - lokhu kuphendula kubonakala kubantwana abaningi. Kodwa kukhona okuhlukile! Ngakho-ke, ungahle ulungiselele ukubonakaliswa okungalungile kokuzalwa kokuqala: kungenzeka ukuthi akunjalo. Yenza esimweni. Izitatimende ezinjengokuthi "Ngemuva kokuzalwa komntwana, thina noPapa ngeke sikuthande kancane" kungcono ukuthatha indawo engcono kunazo zonke: "Uma usana luzalwa, sizokwenza amaqebelengwane amnandi kakhulu!". Noma: "Ugogo wethu uzosivakashela inyanga futhi akutshele zonke izindaba zakho ezizithandayo!"
- Ukulungiswa endleleni yokuphila akugwemeki. Zonke izinguquko ezibalulekile ngendlela evamile - isibonelo, ukuvela kwe-nanny entsha, ukungena enkulisa, esikoleni - mhlawumbe kungakapheli inyanga nengxenye ngaphambi kokubeletha. Okokuqala, ukucindezeleka okubili (ukubukeka komntwana osanda kuzalwa endlini nokujwayela enkulisa) kuzohlukaniswa ngokuhamba kwesikhathi. Ngakho-ke, ingane izobaphumula kalula. Okwesibili, uma unikeza ingane yokuqala enkulisa ngemva kokuzalwa komntwana wesibili, kungenzeka abe nomuzwa wokuthi ngale ndlela abazali bafuna ukumbulala.
- Izingane, ama-teddy bears kanye nezitimela azizona nje amathoyizi, bangabangane bangempela! Sebenzisa lesi sici ukwandisa umuzwa wokubaluleka kwengane. Lapho uya esibhedlela, chaza ingane ukuthi kungani uyidinga, ngitshele ukuthi ukuhlukaniswa kwakho kuzohlala isikhathi eside kangakanani. Masibeke ithoyizi lakhe eliyintandokazi esikhwameni sakho - ucezu lothando lwakhe luyoba ukwesekwa kwakho! Qala "isikhwama sesipho" ekhaya - ngezikhathi ezithile, faka isithombe esihle kumdala (imoto, i-pupa, candy). Vuma kuphela ukuthi esikhwameni sezipho ungabheki ngaphezu kwalokho, uthi, njalo ngezinsuku ezintathu.
Izinkinga nezixazululo ezinsukwini zokuqala namaviki
Ukunakekela usana kusithatha isikhathi esiningi namandla. Ungazami ukuba nesikhathi sokulungisa zonke izindaba nganoma yikuphi izindleko. Kungcono ukuthatha umoya ojulile, uphumule futhi wabelane nabantwana bakho uthando lwakho! Imiklamo ehlakaniphile ethuthukayo ifaka ekhoneni elikude, futhi isicelo somntwana omdala ukutshela enye indaba ngaphambi kokulala kubonakala sengathi ukuhleka usulu? Lapha, okungenani ube nesikhathi sokususa izinkezo ezimbalwa ze-porridge zibe ngowokuqala, futhi ugijimise eshaweni phakathi kokudla nokunakekela ingane esanda kuzalwa! Misa! Ngesifiso sakho sokwenza konke ngendlela engcono kakhulu, ungakhohlwa into esemqoka: uthando aludingi isikhathi esithile esikhethekile. Kungaboniswa ngokoqobo njalo ngomzuzu. Ingabe uncelisa? Tshela ngalesi sikhathi inganekwane endala inganekwane. Asikho isikhathi sokukhipha ndawonye kusuka eplasini? Thenga inhlama eyenziwe ngomumo - kanti ngenkathi wenza umsebenzi wesikole, ake umdala akhiphe imifanekiso evela enhlama noma ahlanganise ama-pretzels. Beka ebhodini lokubhaka, ufafaze isinamoni ubhake - kungama-20 imizuzu. Futhi isidlo sakusihlwa sesilungile! Lezi zikhathi zokuzijabulisa zizosiza ingane ekhulile ukuba ijwayele futhi ithande omncane.
- Uma lokhu kungenzeka, vumela ingane endala ikubone wena nosana olusha esibhedlela (noma ufike ekukhishwe). Yiqiniso, manje ukunakekelwa kwakho kugxile ngokuphelele ngumntwana, kodwa akumelwe sikhohlwe ngalokho okuhlangenwe nakho kokuzalwa. Cabanga ukuthi uyojabula kangakanani uma wena nomyeni wakho niyilungiselela isipho ngokuhlonipha ukuthi manje uyena owokuqala! Futhi kuyoba kuhle kangakanani kuye ukubona ukuthi ubeka isithombe sakhe noma umdwebo etafuleni lokulala embhedeni! Mbonise umfowenu omncane noma udadewethu omncane, engivumela ukuba ngithinte izibambo nezintuthwane ezincane. Ngesikhathi esifanayo, chaza ukuthi uma nje ingane ingadla kuphela, ikhala ne-croak - kodwa emva kwesikhathi izinto eziningi ezithakazelisayo zizofaka kulolu hlu. Yilungele futhi ukuthi owokuqala angakwazi ukwabelana ngenjabulo yabazali ngaphezu kwehlumela elibhekene ne-wrinkled peeking lump. Ingane yaphuma ekamelweni ngezinyembezi, yenqaba ukujwayelana nosana olusanda kuzalwa, mhlawumbe lwaze lwabonisa ukuhlukumezeka kuwe noma i-crumb. Ungamhlukumezi ingane futhi ungazicasuli - mnike ithuba lokuphila le mizwa ehlukumezayo: indlela kuphela engakwazi ukubhekana nayo. Ngikholelwa, kuyoba yisikhathi esifushane kakhulu, futhi izingane zakho ngeke ziphinde zibe namanzi!
- Ezinsukwini zokuqala, ezinzima kakhulu emva kokukhishwa esibhedlela, kubonakala sengathi umdala wenza lokho nje, okuvimbela: uphenduka ngaphansi kwezinyawo zakhe, akanangqondo. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi isilingo esikhulu kangakanani sokukunika amasonto ambalwa "ukuvakashela" kunogogo wakho, zama ukungenzi. Akunandaba, uma ungaphinda ukhulume nomdala nge-raznosolami noma ukhohlwe ukumlungiselela ama-pajamas ahlanzekile. Kodwa umntwana ngeke azizwe enqatshiwe futhi engadingekile. Futhi uma ugogo efuna ukusiza, simemele ekhaya lakho.
- Ngemva kokuzalwa komfowenu noma udadewabo omncane, izingane ezikhulile zivame ukubonisa lokho okubizwa ngokuthi ukuguquka komzimba. Ngokungazelelwe baqala ukukhahlela kuzo zonke ezine, "benze" emaphakathini, wenqaba ukudla nge-spoon bese ufinyelela ibhodlela lamantombazane. Bawulingisa omncanyana ukuba "afanele" uthando lwabazali. Thatha lula. Ungakhuthazi le midlalo, kodwa ungagcizeleli ukuthi ingane iziphatha ngokuvumelana neminyaka yakhe. Futhi maduzane konke kuzobuyela emuva evamile.
- Ngokwemvelo, ngokufika kosana ebusweni bomntwana empilweni yomntwana omdala, kuneminye imikhawulo. Kodwa-ke, zama ukuzethula ukuze izibulo lingenalo umuzwa wokuthi kusukela manje kudingeke ukuba azibandakanye kuzo zonke izicucu zemvuthuluka. Isibonelo, esikhundleni sokuxosha ingane eceleni, mnike umdala ukukusiza. Myeke amanzi avele emgodleni omncane, anike ithawula ehlanzekile, asakaze ukhilimu we-baby (othintana naye oxhumana naye).
Ukuthi ubuhlobo phakathi kwezingane buzokwakhiwa kanjani ngokuyinhloko kunesimo sezulu sengqondo emndenini. Umehluko eminyakeni yobudala awubalulekile. Kodwa-ke, ezinye ze-nuances ezihlobene nayo, kusadingeka ukucubungula:
Isimo sezulu. Unyaka oneminyaka engu-20 ubudala uzothathwa ngokujwayelekile ekuboneni umfowenu noma udadewabo omncane, ngokushesha aba abangane futhi cishe ngokuqinisekile bayodlala ndawonye. Ngakolunye uhlangothi, manje ukuthi umzimba wakho uphila kusukela ekubelethweni kwakamuva, udinga usizo ikakhulukazi. Umsizi (nanny noma ugogo) uzokusiza kakhulu impilo yakho!
3-4 iminyaka . Ingane ekhulile ihamba ngezinkinga okuthiwa yizinkinga zeminyaka emithathu - futhi ivame ukuholela ekuziphatheni okumhlophe-ngisho nabazali abaningi be-phlegmatic. Ungathola ukulinganisa: zama zonke izinsuku ukuze unike isikhathi, ozochitha kuphela nomdala. Futhi ungashiyi izingane zodwa ngaphandle kokuqapha ngisho nemaminithi ambalwa: izingane ezineminyaka emine-nane azikaqapheli ngokugcwele imiphumela yezenzo zabo.
Iminyaka engu-6-7. Kuyisikhathi esiyinkimbinkimbi kumntwana omdala: uya esikoleni, ahlangabezane nokuhlukana ngokomzwelo kubazali bakhe. Ngakolunye uhlangothi, ngazo zonke izindlela kungenzeka ukhuthaze ukubonakaliswa kokuzimela kumdala. Ngakolunye uhlangothi, ngezikhathi ezithile, mnike ithuba lokuba "mncane": masizihlekise, ungahambi usuku olulodwa esikoleni.
Iminyaka engaphezu kwengu-10. Abazali babonakala bephinde bezwa ubusha babo - futhi kuhle! Izibulo lingase livele lizimele futhi lisemini ukufudumala, nokuhlanza izinto, kanye nezingane ezizodlala. Noma kunjalo, ukusekelwa kwakho ngokomzwelo kwengane endala kusadingeka. Bheka izindaba zakhe zesikole, thola isikhathi sokulalela ukuvuma ngesithando sokuqala - futhi ukuthembela phakathi kwakho kuzoqiniswa kuphela.
Izinkinga nezixazululo zonyaka wokuqala
Unyaka emva kokuzalwa komntwana omncinyane, izingane zakha ubuhlobo babo. Umdala uba mnandi ngokwengeziwe ukuxhumana nomncanyana: lapha waya esitokisini, futhi indoda encane yamomotheka kuye, yabamba izandla. Kuyinto epholile kakhulu: ukuqonda ukuthi ongenangqondo ungumuntu ogunyaziwe nesithombe! Ingane endala usengaba nomona futhi ngezinye izikhathi ubacasule abazali. Kubalulekile ukuqonda ukuthi empeleni umuntu omncane uphenduka i-monster hhayi ngoba ufuna ngempela ukukucasula. Umgomo oyinhloko we-capricious ne "nechohuchi" ukuqinisekisa ukuthi abazali bayamthanda njengangaphambili. Ngakho-ke, ungafaki ukubonakaliswa kothando - isisa nokuthandana akunakuningi!
- Khumbula umdala mayelana nezinzuzo zesimo sakhe. Ungakwazi kakade adle ama-strawberries, kanti omncinyane - ubisi lomama kuphela kanye nesobho. Yena, njengomuntu omdala, uya e-cinema naseshashalazini, ukhetha amathoyizi akhe, usiza unina. Kodwa ungamfuni ukuba ahlale ekhulile! Ngezinye izikhathi ungahleka usho ukuthi uthi: "Lindela umzuzu, ngizogcwalisa ipuleti ngokudla komfowenu omkhulu (odade), bese ngizoshintsha i-diaper yakho."
- Zenzele nomuthi omdala womndeni wakho. Dweba ekhasini elikhulu lika-Whatman, futhi emahlathini, unamathisele izithombe kuwo wonke amalungu omndeni. Lapho ingane ibona ukuthi yena nomfowabo (udadewabo) yizingxenye zomndeni omkhulu womndeni, lokhu kuyokwenza kube nombumbano wobumbano nokubumbana.
- Umntwana okhudlwana uphoqeleka njalo ekuseni ukuze aphume embhedeni oshisayo, agqoke abuyele enkulisa noma esikoleni. Futhi omncane angakwazi ukulala kuze kube semini futhi angahlukanisi nomama okwesikhashana. Yiqiniso, ngokucasuka! Ngezikhathi ezithile, hlela "iholidi elingakapheli": okungenani kanye ngenyanga, thatha umdala ensimini (esikoleni) ekuqaleni. Futhi ngisho ngokuphelele mahhala ezifundweni. Lolu suku, oluhlala nomndeni, kanti abanye ontanga badla iphariji ngesikhathi noma bahlala emahokheni, kuzoba yeholide langempela lomntwana.
"Uma ingane ifunda ukuhamba, ucwaningo lwakhe luzobe lungenakuziphendulela." Uzoqala ukungenelela emathoyizi omntwana osekhulile, aphule izincwadi zakhe futhi ahlakaze izimpawu. Zama ukuqinisekisa ukuthi isikhala esiphilayo somdala (kungakhathaliseki ukuthi igumbi langasese noma ithebula langasese), akekho oye wangena ngaphandle kokufuna. Futhi wena noma umfowenu noma udadewethu. Ukujwayela okuncane kunazo zonke igama elithi "akunakwenzeka." Manje izingane zifunda "ukwabelana" nabazali bazo futhi zithole ukuyekethisa. Izinyembezi nokulwa kulesi sigaba cishe akunakugwemeka. Ngikholelwa, esikhathini esizayo uzovame ukuzwa kubantwana bakho: "Yeka injabulo enginayo umfowethu noma udadewethu!" Njengoba esekulungiselele ingane endala ukuzalwa komncinyane, abazali bazoqinisa kuphela umndeni wabo.
Yini ongayinika ingane eneminyaka eyodwa ubudala
Kunokuba uthathe izinyane elilodwa elineminyaka elilodwa
Umehluko weminyaka phakathi kwezingane kusuka eminyakeni emibili kuya kweyine
Izingxabano zezingane nezindlela zokuzixazulula
Indlela yokuthuthukisa amakhono wengane
Izinkinga zokukhulisa ingane emndenini ongaphelele
Lapho I-Assumption Post? Yini ongayidla ngesikhathi sokuzila? Amasiko nezici. Ukushada okuthunyelwe ku-Uspensky
Ukukhipha ingane ezandleni - ingabe kufanele?
Ungakwenza kanjani ukwakheka kwansuku zonke?
Indlela yokunqoba inhliziyo yomuntu
Indlela yokuqaphela amanga ngezenzo zomuntu
Ungayiphuza kanjani imifino yemifino yemvelo
Yimaphi ama-saladi angenziwa kusuka ku-avocado
Ukudla okukhanyayo konyaka omusha omusha
Izabelo zesikole zehlobo
Ukukhuluphala kwengane 1, izimbangela
Kusho ukuhlinzekwa kwe-SPA, ukunakekelwa kwezinyawo nezandla
I-Sex Cancer iHosopophasi
Amakhowe asetshenziswe ngaphansi koboya obubomvu
Imfashini yezimfashini ezithombeni
Umyeni wase-Overseas: izici zamadoda avela kwamanye amazwe
Iyiphi i-filler engcono kakhulu endlini yangasese yekati?